uzinzo-HC yokuPakisha iAsia
Kuyo yonke imisebenzi yethu, nakulo lonke unikezelo lonikezelo, siyaqhubeka nokwenza amanyathelo amakhulu ekunciphiseni ubume bendalo esingqongileyo. Isicwangciso-qhinga sethu sakhele phezu kwaloo nkqubela phambili, simisela imigangatho ephezulu kakhulu yokunciphisa ukukhutshwa kwegesi yendlu eluhlaza, ukunciphisa inkunkuma kunye nokusetyenziswa kwamanzi, kunye nokufumana izixhobo zethu ngendlela enesidima kunye noxanduva olunokwenzeka.
1.ukuqinisekisa ukusebenzisa i-100% ye-FSC yezinto eziqinisekisiweyo ukunciphisa ukonzakala kwilizwe lethu lomama.
I-2.100% yokuphinda isebenze kwakhona ngaphandle koomazibuthe, akukho nkqubo yomphezulu, kunye nokufakwa kweplastiki kwiphepha. Ukupakishwa kwethu kunokuphinda kusetyenziswe kwakhona kwinqanaba nje elinye.
3.Ngokuchasene ne-inki esisiseko ye-petroleum-base, inki esekwe kwisoya ithathwa njengobungqongileyo kwindalo, inokubonelela ngemibala echanekileyo, kwaye yenze kube lula ukwenza iphepha kwakhona.
I-HC Packaging iyazingca ngenkcubeko yayo yenkonzo kunye nokuzibophelela kwethu ekuqinisekiseni ukunyibilika koluntu apho thina kunye nabathengi bethu sihlala kwaye sisebenza khona, nalapho iimveliso zethu zenziwe khona. Sikhonza olo hlanga ngeenkqubo zokuxhobisa, iminikelo yezemali kunye nemveliso, kunye nokuzithandela, ukwenza ifuthe elihle eluntwini.
Kwi-2020, amavolontiya e-HC Packaging anikele ngaphezulu kweeyure ezili-1,000 XNUMX kwizizathu zalapha, ukusuka ekuboneleleni ngokutya kubadala, inkxaso yezemali kwizikolo ezibini eHunan, China, ukupakisha nokunikela ngeencwadi kubafundi abasweleyo, nezinye ezininzi.
Ilungelo lokushicilela © 2021 - 2026 Ukupakisha kweHC.
Yongeza: O 9B, Lo Cn15, Duong So 4 Kcn Song Than 3 P Phu Tan, TP Thu Dau Mot Tinh Binh Duong, Vietnam